WARBIXIN: Haddii ay Ciyaartoydu Funaanad ama Kubbad ii saxiixaan maxay tahay Faa’iidada ku jirta? – Gool FM
WARBIXIN: Haddii ay Ciyaartoydu Funaanad ama Kubbad ii saxiixaan maxay tahay Faa’iidada ku jirta?
(Yurub) 17 Luulyo 2021. Sida aad cinwaankaba ku aragtaan waxaan warbixintaan idinkaga diyaarinay faa’iidada laga helo saxiixa ciyaartoyda caanka ah ee kubadda cagta marka ay kuu saxiixaan Funaanad, Kubbad, Kabo ay kulan ciyaareed ku dheeleen, Sawir, Astaanta Kooxda iwm? Muxuu tararayaa saxiixaasi?, Maxaa faa’iido ah oo laga helaa? Ma garoommada kubadda cagta ayaad si bilaash ah ku galaysaa haddii aad wadato saxiix ciyaartooy? Ma tikidh lacag la’aan ah ayaa lagu siinayaa, mise dhaqaale kale ayaa lagu helaa saxiixyada ciyaartoyda iyo shaqsiyaadka caanka ah?
Haddii aad dhowr jeer is weydiisay waxa ku dhex jira saxiixa gaarka ah ee laacibiinta kubadda cagta iyo waxa ay ka faa’iidaan dadka saxiixyadaa la siiyo haddaba warbixintan ayaad kaga bogan doontaa arrintaasi.
Waxaan shaashadaha caalamka marar badan ka daawannaa ciyaartoyda caanka ah ee kubadda cagta ama tababareyaal dad shacab ah qallin ugu saxiixaya funaanadaha kooxaha ay taageeraan, kubbado, kabo, sawirro, buugaag iwm, iyadoo dadka loo saxiixayana wejiyadooda ay ka muuqato farxad iyo rayn rayn, qaar baa intay tikidhyo diyaaradeed goostaan safaf dhaadheer u sii gala garoommo diyaaradeed oo dalal kale ku yaalla halkaas oo ay ku sugaan xiddig caan ah oo waddankaa kulan ciyaareed ku soo dheelaya, waxaana marka ciyaartoyda ay taageeraan ay ka soo degaan garoommada kubadda cagta ay weydiistaan saxiixyadooda.
Saxiixyada ciyaartoyda iyo shaqsiyaadka caanka ah ee kubadda cagta kaama caawinayaan in aad si bilaash ah ugu soo daawato kulan ciyaareed ka dhacaya garoon hebel oo saxiixa ciyaartoygaasi uu kuu noqdo sida tikidhkii aad ciyaarta ku geli lahayd, laakiin sababta saxiixyada ciyaartoyda loo raadiyo waxaa ugu weyn inuu qofku u keydsado qaab xusuus ah (Memorabilia), tusaale: “Waxaan heystaa funaanad ama kubbad uu Diego Maradona gacantiisa iigu saxiixay 1986-kii”.
Ma wax aan ahayn xusuustaas oo laga faa’iido saxiixyada ciyaartoyda ayaa jira?
Haa waa ay jiraan, tusaale haddii aad haysato funaanad uu kuu saxiixay xiddig kubadda cagta oo caan ah laba midba adiga ayay ku jirtaa; inaad funaanaddaa ama shaygaasi laguu saxiixay aad derbiga gurigaaga surato adigoo xusuus ahaan u haysanaya ama inaad suuqa soo dhigto funaanaddaasi si lagaaga iibsado.
Dhowr arrimood ayaa ka horreeya in funaanad uu kuu saxiixay ciyaartooy aad ku iibiso qiimo sare, waxaana arrimahaa ka mid ah heerka ciyaartoyga wax kuu saxiixay ma ciyaaryahan caan ah baa mise waa ciyaaryahan aan la garanayn, qiimo intee la eg ayuu ka joogaa suuqa kubadda cagta, sidoo kale waxyaabaha laga eego qiimaha ay goon karto funaanad uu ciyaartooy kuu saxiixay waxaa ka mid ah in xiddiga saxiixiisa ku siiyay uu ku guuleystay Koob Adduun, taas oo sare u qaadaysa qiimaha funaanaddaasi.
Haddii aad doonayso inaad iibiso funaanad ama sheey uu kuu saxiixay ciyaartooy caan ah mararka qaar qiimo sidaa u macquul ah lagaama siisanayo tusaale haddii ciyaartoyga aad saxiixiisa sidato uu xilli hore ciyaaraha ka fariistay ama la waayo meel uu ku dambeeyay oo uu kubadda cagta iyo arrimeheeda oo dhan isaga baxay.
Waxaa kaloo iyana muhiim ah oo qiimo sare u yeeli kara funaanad uu xiddig kuu saxiixay haddii funaanaddaasi ay ahayd mid lagu ciyaaray ciyaar kama dambeys ah sida Final-ka Koob Adduun, kama dambeysta Horyaallada maxalliga ah, Koobka Qarammada Yurub ama ciyaartii ugu dambeysay Koobka UEFA Champions League, haddii laacibka aad saxiixa ka haysato uu Koobabkaa final-ka ah midkood qaadayna kaba sii fiican.
Kaba soo qabo hal funaanad ayaa waxaa kuu wada saxiixay dhowr ciyaartooy, haddii ay niyadda kaaga soo dhacdo in aad funaanaddaa dib u iibiso waxaa la eegayaa laacibiinta kuu saxiixay haddii ay yihiin rag heer sare ah Top Class Players, laakiin haddii ay ku jiraan ciyaartooy faashiliin ah oo kooxo hoose u ciyaara ama u soo ciyaaray, funaanaddaasi macno weyn ma sameyneyso lacag bandanna kuma heleysid.
Dadka qaar marka ay nasiib u yeeshaan saxiixa xiddig caan ah oo kubadda cagta heer wanaagsan ka gaaray waxay funaanaddii loo saxiixay ku dhex daraan dharkooda caadiga ah ee armaajada ugu jira, halka dadka qaarna ay funaanaddii iyadoo cusub ay geliyaan frame muraayad ah iyagoo kaddibna surta derbiga guryahooda.
Hadhoow markii la is yiraahdo ha la iibiyo funaanaddaasi waxaa la eegayaa inay funaanaddu ay duug tahay iyo inay cusub tahay, midda cusub ayaana ka qiimo badnaanaysa tan duugga ah ama jeex jeexan, waayo wixii aan qurxanayn ma soo jiidanayaan dadka wax iibsanaya.
Waxaa jira websiteyo caan ah oo lagu kala iibsado funaanadaha iyo shey yaasha ay ciyaartoydu saxiixaan, waxaana bogaggaasi ka mid ah bogga online-ka ah ee la yiraahdo ‘Catawiki’ ee lagu kala gato waxyaabaha taariikhiga ah, waxaana website-kan la aas-aasay sanadkii 2008-dii.
Waxaad arkaysaa taageere iska iibinaya funaanad uu ayaan dhoweyd u saxiixay xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ciyaar uu la ciyaarayay kooxda Sampdoria, dabcan kulankaasi waxaa laga yaabaa in Juventus laga badiyay, taasna waxay qiimo dilaysaa funaanaddaasi, waxaana taageerahani markaa uu ku helayaa illaa 200 oo Euro, laakiin haddii haysato funaanad lagu xasuusan karo kulan taariikhi ah isla markaana uu kuu saxiixay xiddig weyn sida Pele, Maradona, Ronaldo, Cristiano, Messi iwm waxaa mararka qaar lagaaga iibsanayaa funaanaddaasi illaa 1,600 oo Euro.
Dadku isku mid ma’ahan oo qaar baa daacad ah, qaarna waa khiyaanooleyaal, qaar baa saxiixa ugu saxiixan funaanadda ay wataan uu yahay mid rasmi ah ama original ah oo uu leeyahay xiddiga ay saxiixiisa haystaan, halka qaar kalena ay la soo shir tagaan saxiixyo been abuur ah (Fake Autograph), haddaba su’aashu waxay tahay sidee lagu kala xaqiijinayaa arrintaasi?.
Bogga Catawiki wuxuu leeyahay wax la yiraahdo sugid – (Authentication) oo loola jeedo in la soo xaqiijinayo saxiixa kuu saran funaanadda aad rabto in aad iibiso ma mid sax ahbaa mise waa mid been abuur ah, haddii uu sax noqdo waxaa lagu siinayaa Shahaado Sugnaan (Certificate of Authenticity), kaddibna waxaa si sharaf leh lagaaga iibsanayaa funaanadda ama sheyga saxiixa leh ee aad iibineyso.
Haddii aan soo qaadanno qaar ka mid ah funaanadihii ay saxiixeen Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi iyo Neymar ee lagu kala iibsaday bogga Catawiki waxaa ka mid ah funaanad uu 2017-kii weeraryahanka xulka Argentina iyo kooxda Barcelona Lionel Messi u saxiixay qof taageere ah, taasoo looga iibsaday 1,500 oo Euro, sababtuna waxay tahay Messi waa dhaliyaha ugu goolasha badan taariikhda kooxda Barcelona maadaama uu dhaliyay 709 gool, halka uu heysto 6 kubbadood oo dahab ah.
Xiddigii hore ee xulka Argentine Diego Maradona ee geeriyooday sanadkii hore 2020 ayaa funaanad uu saxiixay dhammaadkii Koobkii Adduunka 1986-kii ee uu xulkiisu 3-2 kaga adkaaday xulkii Galbeedka Jarmalka, kulankaas oo ka dhacay waddanka Mexico waxaa qofkii lahaa looga iibsaday 1,630 Euro, sababtoo ah maalintaa waxaa Maradona iyo xulkiisu ay ku guuleysteen Koobkii Adduunka.
Waxaa kaloo iyana jirta funaanadda lambarka 11’aad ee kooxda Barcelona ee uu saxiixay ciyaaryahan Neymar Junior ka hor intii uusan tegin Barcelona kuna biirin kooxda PSG, waxaana funaanaddaasi oo frame muraayad ah ku jirtay, saxiixeedana la xaqiijiyay lagu iibsaday 1,500 oo Euro, sababtuna waa Neymar oo Barcelona kula guuleystay 1 Champions League, labo Horyaalka La Ligaha ah iyo saddex Koob oo ah Copa del Rey.
Dhanka kale waxaa sanadkii 2012-kii uu xiddigii hore ee kooxda Real Madrid, haatanna u dheela Juventus ee Cristiano Ronaldo funaanad uu u saxiixay ruux taageere ahaa lagu kala iibsaday 1,660 Euro, sababtoo ah Ronaldo waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican ee soo maray taariikhda kubadda cagta, halka xilli ciyaareedkii uu funaanaddaasi saxiixay ee 2011-2012-na uu Real Madrid u dhaliyay 46 gool oo Horyaalka La Ligaha ah.
Intaas waxaan ku soo koobeynaa warbixintii aan ku iftiimineynay faa’iidada laga helo haddii funaanad ay kuu saxiixaan xiddigaha ugu caansan kubadda cagta, waxaan filayaa in aad wax badan ka kororsatay.